Fizahan-tany ara-pinoana: tsena mahafinaritra lehibe
Home » Travel Associations News » Fizahan-tany ara-pinoana: tsena mahafinaritra lehibe
Ny fizahan-tany ara-pinoana izay antsoina koa matetika hoe fizahan-tany amin'ny finoana dia karazana fizahan-tany, toerana anaovan'ny olona tsirairay na antokon'olona manao fivahiniana masina, misionera na fialamboly (fiarahana).
Ny endrika fizahan-tany ara-pivavahana lehibe indrindra eto an-tany dia atao amin'ny fivahiniana masina isan-taona any Mekah, Arabia Saodita. Eny, any Maorisy dia ity tranonkala Masina ity no niarahan'ireo Hindoa isan-taona nivahiny sy nitsidika azy isan'andro. Malaza noho ny fomba fijeriny panoramic & maro hafa.
Ny fizahan-tany ara-kolotsaina dia faritan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany (Report WTO, 2012) ho "fitsangatsanganana, izay tanjon'izy ireo lehibe na iombonany dia ny fitsidihana ireo tranonkala sy hetsika izay ny lanjan'izy ireo ara-kolontsaina sy ara-tantara no nahatonga azy ireo ho lasa lova kolontsain'ny vondrom-piarahamonina"
Antontan'isa: na dia tsy nisy fanadihadiana farany vita momba ny fizahan-tany ara-pinoana maneran-tany aza, dia norefesina ny ampahany sasany amin'ny indostria: Araka ny filazan'ny World Tourism Organisation, tombanana 300 ka hatramin'ny 330 tapitrisa ny isan'ireo mpivahiny mitsidika ireo toerana fivavahana lehibe manerantany.
Ireo mpitarika ny fizahantany dia manazava tsara anao ireo Symbols of Shiva, ary koa anecdotes mahatalanjona mifandraika amin'ity toerana masina ity, mino aho fa tsy feno ny fialantsasatrao any Maurice raha tsy misy fitsangatsanganana an'i Ganga Talao sy ny South West Tours. Ity ny havokavok'i Maorisy!
Fanajana: - Riaz Nassurally, talen'ny marketing ho an'ny fizahantany ara-tsosialy
Geoffrey Lipman ao amin'ny SUNx: Manova ny zava-drehetra tokoa io
Nahavelom-bolo ny fizahantany komoro